admin မှ 22-01-10 ရက်နေ့တွင်
1၊ ဓာတုဂုဏ်သတ္တိများ- 304 stainless steel plate သည် သံမဏိတွင် ဓာတုနှင့် electrochemical corrosion resistance သည် တိုက်တေနီယမ်အလွိုင်းပြီးလျှင် ဒုတိယအကောင်းဆုံးဖြစ်သည်။2၊ ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာဂုဏ်သတ္တိများ- အပူဒဏ်ခံနိုင်ရည်၊ မြင့်မားသောအပူချိန်ဓာတ်တိုးဆန့်ကျင်မှု (အပူဒဏ်ခံနိုင်ရည်မရှိ) မြင့်မားသောအပူချိန် stainless steel ...
ထူထဲသော သံမဏိ ချောမွေ့မှုမရှိသော ပြွန်၏ နံရံများကို ဖျက်စီးခြင်းအပေါ် ကွဲပြားသော လုပ်ငန်းစဉ်ဘောင်များ၏ သက်ရောက်မှု
21-12-31 ရက်နေ့တွင် admin မှ
သင်္ချာပုံစံခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာမှုအရ၊ ထူထဲသောတံတိုင်းခတ်ထားသော သံမဏိအစပ်မရှိသောပြွန်အတွက် တုန်ခါမှုကို ဖျက်စီးခြင်းဆိုင်ရာ ကန့်သတ်ချက်ဆိုင်ရာ ဒေတာဇယားကို စမ်းသပ်ခဲ့သည်။တုန်ခါမှုကို ထိခိုက်စေသည့် အကျိုးသက်ရောက်မှုကို စမ်းသပ်ခြင်းများသည် လုပ်ငန်းစဉ်ဘောင်များအတွက် မတူညီသော တုန်ခါမှုလမ်းညွှန်ချက်များဖြင့် လုပ်ဆောင်ခဲ့သည်...
Stainless Steel ခါးပတ်များကို အသုံးပြုခြင်းနှင့် အဆင့်အတန်းခွဲခြားခြင်း။
21-12-20 ရက်နေ့တွင် admin မှ
stainless steel strip သည် အလွန်ပါးလွှာသော stainless-steel plate ၏ extension တစ်ခုဖြစ်သည်။အမှန်တော့၊ ၎င်းသည် စက်မှုလုပ်ငန်းတွင် အသုံးပြုသည့် ပန်းကန်အမျိုးအစားတစ်ခုလည်းဖြစ်သည်၊ သို့သော် ၎င်းသည် သာမန်ပန်းကန်ပြားများနှင့် ကွဲပြားသည်၊ ၎င်း၏ပုံသဏ္ဍာန်သည် ပိုရှည်သည်။လျှောက်ထားသည့်အကွက်သည် သာမန်ပန်းကန်ပြားများနှင့် ခြားနားသည်။လက်ရှိအချိန်မှာတော့ အမျိုးအစားတွေ အများကြီးရှိပါတယ်...
Stainless steel welded pipe ၏ အရည်အသွေးကို မည်သို့ခွဲခြားနိုင်မည်နည်း။
21-12-13 ရက်နေ့တွင် admin မှ
သံမဏိဈေးကွက် ထွန်းကားလာသောအခါတွင် လုပ်ငန်းအများအပြားသည် စတီးလ်ဂဟေပိုက်များ ရောင်းဝယ်ဖောက်ကားခြင်းလုပ်ငန်းသို့ စတင်ဝင်ရောက်လာကာ စျေးကွက်ကို လျင်မြန်စွာ ချဲ့ထွင်ကြသော်လည်း သံမဏိဂဟေပိုက်များ ရောင်းဝယ်ဖောက်ကားမှု စျေးကွက် ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်လာကာ တစ်ချိန်တည်းတွင် ၎င်း၏ ထုတ်ကုန်အရည်အသွေး မညီမညာ၊ ဘာဖြစ်သလဲ...
ရောင်ခြယ်ဘုတ်ပြားကို အသုံးပြုခြင်း အလွှာအဖြစ် သွပ်ရည်ပြားစတီးပြားကို အသုံးပြု၍ ရောင်စုံစတီးပြားပြားကို သွပ်ပြားအကာအကွယ်အပြင် သွပ်ပြားအလွှာပေါ်ရှိ အော်ဂဲနစ်အလွှာပေါ်တွင် ကာဗာနှင့် သီးခြားလုပ်ဆောင်ပေးသည့် လုပ်ဆောင်မှုဖြစ်ပြီး သံမဏိပြားများ သံချေးတက်ခြင်းမှ ကာကွယ်ပေးနိုင်သောကြောင့်လည်းကောင်း၊ ဝန်ဆောင်မှု သက်တမ်း ပိုကြာပါတယ်...
အဆက်မပြတ် Casting Billets များ ကွဲထွက်ခြင်း၏ အကြောင်းရင်းများကို ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာခြင်း။
admin မှ 21-09-08 ရက်နေ့တွင်
စဉ်ဆက်မပြတ် ကာစ်တင်ခြင်း၏ ခွဲထွက်ခြင်းသည် စဉ်ဆက်မပြတ် ကာစ်တင်ခြင်း၏ ပြင်းထန်သော ထုတ်လုပ်မှု မတော်တဆမှုဖြစ်သည်။ဤဆောင်းပါးသည် ဖြစ်စဉ်၏ ကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့်ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာမှုနှင့်အတူ ဆက်တိုက်ကွဲထွက်ရခြင်းအကြောင်းရင်းများနှင့် ဆက်တိုက်ကွဲထွက်ရခြင်းအကြောင်းရင်းများကို ဆွေးနွေးထားသည်။ဘေလ်ပြားကို အဆက်မပြတ် သွန်းလုပ်ခြင်းမှ...
တိကျသောသံမဏိပိုက်များနှင့် တိကျသောသံမဏိပိုက်များ၏ အားသာချက်များကို မိတ်ဆက်ခြင်း။
admin မှ 21-09-02 ရက်နေ့တွင်
တိကျသောသံမဏိပိုက်များအကြောင်း နိဒါန်းနှင့် တိကျသောသံမဏိပိုက်များ၏ အားသာချက်များ တိကျသောသံမဏိပြွန် တိကျသောသံမဏိပြွန်သည် အအေးပုံဆွဲခြင်း သို့မဟုတ် ပူပူနွေးနွေးဖြင့်ပြုလုပ်ထားသော တိကျသောသံမဏိပြွန်ပစ္စည်းဖြစ်သည်။တိကျသောစတီးပိုက်များ၏ အတွင်းနှင့် အပြင်နံရံများတွင် အောက်ဆိုဒ်အလွှာမရှိသောကြောင့် မြင့်မားသော p...
Stainless Steel က ဘာကြောင့် သံချေးတက်တာလဲ။သံလိုက်ဓာတ်က ဘာကြောင့်တုန်း။
admin မှ 21-09-01 ရက်နေ့တွင်
Stainless Steel က ဘာကြောင့် သံချေးတက်တာလဲ။သံလိုက်ဓာတ်က ဘာကြောင့်တုန်း။စတီးလ်ပိုက်များ၏ မျက်နှာပြင်ပေါ်တွင် အညိုရောင်ချေးအစက်အပြောက်များ ပေါ်လာသောအခါ လူများ အံ့အားသင့်သွားသည်- "သံမဏိသံမဏိသည် သံချေးမတက်၊ သံချေးသည် သံမဏိမဟုတ်၊ ပြဿနာရှိနိုင်သည်...
Blast furnace အအေးခံကိရိယာဖွဲ့စည်းပုံ
21-08-31 ရက်နေ့တွင် admin မှ
Blast furnace cooling equipment structure သည် Blast furnace cooling သည် အကာအကွယ် slag အရေပြား၊ သံခွံနှင့် ဂရပ်ဖိုက်အလွှာများ ဖွဲ့စည်းမှုအတွက် အရေးကြီးသော အခြေအနေတစ်ခုဖြစ်သည်။၎င်းသည် refractory lining ၏အပူချိန်ကိုလျှော့ချပေးပြီးတိုက်ရိုက်အကာအကွယ်ပေးသည်။အဆောက်အဦရဲ့ ကြံ့ခိုင်မှုကိုလည်း ကာကွယ်ပေးပါတယ်...
admin မှ 21-08-30 ရက်နေ့တွင်
သံမဏိပြုလုပ်ခြင်းဆိုင်ရာ အခြေခံအသိပညာသည် သံမဏိပြုလုပ်ခြင်းမှ စတင်သည်။သံမဏိသည် ဝက်သံမှလာသည်။သံသတ္တုရိုင်းမှ ရောစပ်ထားသော ဝက်သံတွင် ကာဗွန်ပါဝင်မှု မြင့်မားပြီး အညစ်အကြေးများစွာ (ဥပမာ ဆီလီကွန်၊ မန်းဂနိစ်၊ ဖော့စဖရပ်၊ ဆာလဖာစသည်) ပါဝင်သည်။ထို့ကြောင့် ဝက်သံသည် ပလတ်စတစ် နှင့် မာကျောမှု ကင်းမဲ့ပြီး စက်ပိုင်းဆိုင်ရာ ညံ့ဖျင်းသော...
ပူပြင်းသော သွပ်ရည်စိမ်စတီးလ်အမျိုးအစားများ၊ အသုံးပြုမှုများ၊ ထုတ်လုပ်မှုနည်းပညာ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး လုပ်ငန်းစဉ်နှင့် အခြားပြဿနာများကို အကျဉ်းချုပ် မိတ်ဆက်ခြင်း။
admin မှ 21-08-27 ရက်နေ့တွင်
မကြာသေးမီနှစ်များအတွင်း hot-dip သွပ်ရည်စိမ်စတီးလ်အမျိုးအစားများ၊ အသုံးပြုမှုများ၊ ထုတ်လုပ်မှုနည်းပညာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုလုပ်ငန်းစဉ်နှင့် အခြားပြဿနာများကို မကြာသေးမီနှစ်များအတွင်း ၎င်း၏ကောင်းမွန်သော corrosion resistance၊ လှပသောပုံပန်းသဏ္ဍာန်ကြောင့် အသုံးပြုသူများ ကောင်းစွာလက်ခံရရှိခဲ့ပါသည်။ ...
သွပ်ရည်စိမ်စတီးကွိုင်များ၏ အဖြစ်များသော ပြဿနာများ
admin မှ 21-08-26 ရက်နေ့တွင်
သွပ်ရည်စတီးလ် ကွိုင်၏ အဖြစ်များသော ပြဿနာများ 1. ကမ္ဘာပေါ်တွင် သွပ်ရည်စိမ်သည့် နည်းလမ်း မည်မျှ အမျိုးအစားများ ရှိပါသနည်း။အဖြေ- electro-galvanizing၊ hot-dip galvanizing နှင့် galvanizing နည်းလမ်းသုံးမျိုးရှိသည်။2. ပူပြင်းသော သွပ်ရည်စိမ်စာရွက်များအတွက် အသုံးများသော စတီးလ်အဆင့်များသည် အဘယ်နည်း။တစ်ခု...